Izindaba - Sizochaza Izinzuzo Eziyingqayizivele Ze-Solar Photovoltaic Power Generation
1. Amandla elanga angamandla ahlanzekile angapheli, futhi ukukhiqizwa kwamandla kagesi we-solar photovoltaic kuphephile futhi kunokwethenjelwa futhi ngeke kuthinteke yinkinga yamandla kanye nezici ezingazinzile emakethe kaphethiloli;
I-2, ilanga likhanya emhlabeni, amandla elanga atholakala yonke indawo, ukukhiqizwa kwamandla kagesi we-solar photovoltaic kufanelekile ikakhulukazi ezindaweni ezikude ezingenawo ugesi, futhi kuzonciphisa ukwakhiwa kwegridi yamandla amabanga amade kanye nokulahlekelwa kwamandla kagesi wokudlulisa;
3. Ukukhiqizwa kwamandla elanga akudingi uphethiloli, okunciphisa kakhulu izindleko zokusebenza;
I-4, ngaphezu kokulandelela, i-solar photovoltaic power generation ayinazo izingxenye ezihambayo, ngakho-ke akulula ukulimaza, ukufakwa kulula, ukugcinwa okulula;
I-5, i-solar photovoltaic power generation ngeke ikhiqize imfucuza, futhi ngeke ikhiqize umsindo, i-greenhouse namagesi anobuthi, ingamandla ahlanzekile afanelekile.Ukufakwa kwesistimu yokukhiqiza amandla e-photovoltaic engu-1KW kunganciphisa ukukhishwa kwe-CO2600 ~ 2300kg, NOx16kg, SOx9kg nezinye izinhlayiya ngo-0.6kg njalo ngonyaka.
I-6, ingasebenzisa ngokuphumelelayo uphahla nezindonga zesakhiwo, akudingeki ukuba ithathe umhlabathi omningi, futhi amaphaneli okukhiqiza amandla elanga angakwazi ukumunca amandla elanga, bese enciphisa izinga lokushisa kwezindonga nophahla, anciphise umthwalo air conditioning yasendlini.
7. Umjikelezo wokwakhiwa kwesistimu yokukhiqiza amandla elanga ye-photovoltaic mfushane, impilo yesevisi yezingxenye zokukhiqiza amandla yinde, imodi yokukhiqiza amandla iyaguquguquka, futhi umjikelezo wokubuyisela amandla wesistimu yokuphehla amandla mfushane;
8. Akunqunyelwe ukwabiwa kwezinsiza ngokwendawo;Ugesi ungaphehlwa eduze kwalapho osetshenziswa khona.
Iphaneli yeSolar Monocristalino, 550w Iphaneli yeSolar, 220 Volt Solar Panel Kits, 300 Watt Solar Panel, Izindleko Ezimaphakathi Zamaphaneli elanga, Iphaneli yeSolar Monocristalino 360w,